Wararka 2019 – Read Somali Newspaper!
Read Somali Newspaper!
Read Somali Newspaper! » Wararka 2019
WARARKA MAANTA 31ka Maarso 2020 Sir Culus!
Su’aallaha Maanta: Maxuu Ciidanka #Ethiopia u soo geliyey #Soomaaliya Madaxweyne Farmaajo “Been-Hawaas”? Ma qaadato lacag luulaash iyo musuqmaasuq ah Boqortooyadda Saxaafadda Soomaaliya/Boqortooyadda Warbaahinta Soomaaliya Madaxweyne Mudane Farmaajo marka iska-casil xukunka iyo siyaasadda dalka waad ku fashilantay oo #Ethuiopia waxba kuuma qaban karto? Yaa Garoowe qarxiyey? Yaa la dooran doonaa Madaxweynaha Soomaaliya 2021 Mudane Madaxweyne Shiikh Shariif Shiikh Axmed rumayso ma ha rumaysan? Maxay beesha caalamka xiriir toos ah hadda ula samaysatay Madaxweynihii hore Mudane Madaxweyne Shiikh Shariif Shiikh Axmed? Yaa noqon doona Raysal Wasaaraha soo socda 2021? Maxay tahay sababta #Madaxweyne Farmaajo u keenay #Ethiopia Soomaaliya? Maxayse tahay sababta aysan labada aqal iyo guddoomiyayaashooda uga hadli sababta si sharci-darrada ah ee ay Ciidanka #Ethiopia ku soo galeen Soomaaliya? Yaa la khaldi karaa?
Muqdosho 31ka Maarso 2020 War-saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda caafimaadka ee xukuumadda Soomaaliya ayaa lagu sheegay in maanta lasii daayey afar qof oo ay wasaaraddu horay u karaantiishay, xilli ay kasoo degeen garoonka Muqdisho, iyagoo ka yimid dalka dibadiisa.
Afarta qof ayaa looga shakisanaa in ay qabaan cudurka Coronavirus, waxaana lagu hayey oo ay dowladdu ku karaantiishay cisbitaal ay leedahay AMISOM.
Wasaaradda ayaa qoraalkeeda ku sheegtay in go’aanka ah sii deynta afartaan qof ay qaadatay kadib markii la baaray oo laga waayey cudurkii looga shakisanaa ee Coronavirus.
Sidoo kale afarta qof ee lasii daayey waxaa ku jira ruux horay baaritaan loogu sameeyey oo laga helay Coronavirus, balse markii dambe laba baaritaan oo kale looga waayey cudurkaas.
Qoraalka kasoo baxay wasaaradda caafimaadka ayaa lagu sheegay seddaxda qof ee kale mid laba baaritaan lagu sameeyey, isla markaana laga waayey cudurka Coronavirus.
Ugu dambeyntii qoraalka kasoo baxay wasaaradda caafimaadka oo ku qornaa luuqadda English-ka ayaa lagu xusay magacyada afarta ruux ee maanta la fasaxay kadib markii gabi ahaanba laga waayey cudurka Coronavirus, oo shaki la xiriira ay maalmihii lasoo dhaafay u karaantiilnaayeen.
Dowladda Soomaalitya, gaar ahaan wasaaradda caafimaadka ayaa horay u shaacisay in tirada guud ee kiisaska la xiriira Coronavirus ee dalka laga helay ay gaarayaan illaa seddax ruux oo mid qandaraasle UN-ka ka tirsan yahay, balse waxaan cadeyn in tiradaas uu ku jiro qofka maray seddaxda baaritaan lee labadii dambe looga waayey cudurka, ee ku jira dadka galabta la fasaxay.
Muqdosho 31ka Maarso 2020 Warar ay heshay Caasimada Online ka heshay xisbiga Himilo Qaran ayaa sheegaya in dowladda federaalka Soomaaliya ay is hortaagtay Dacwadii xisbiga Himilo Qaran ka gudbiyeen hay’adda duulista rayidka Soomaaliya.
Dacwada oo la gudbiyay bishii October ee sanadkii hore ayaa ilaa hada taagan iyadoo dhowrkii bil ee la soo dhaafay aysan qabsoomin.
Markii ugu horeysay oo ay Maxkamadu furantay waxay aheyd 18-kii bishii 11-aad ee sanadkii hore waxayna wararku sheegayaan in wixii markaasi ka dambeeyay ay Maxkamada sare dib u dhigeysay guda galka Kiiskaan.
“Waxaa noo muuqata cadaadis la saaray maxkamada sababtoo ah qareenadii aan qabsanay oo aan shaqaale dowladeed aheyn ayaa noola diiday, xataa waa badalnay walina wax socda maleh” ayuu yiri sarkaal ka tirsan Himilo Qaran.
Mid kamid ah saddexda qareen ee u doodaya Xisbiga Himilo Qaran ayaa shaqada dowladda iska casilay ka hor inta aan kiiskaan la bilaabin, balse waxaa Soomaaliya is casilaadiisa diiday dowladda. Sidoo kale qareeno kale oo ay qabsadeen Himilo Qaran ayaa ilaa hada kiiskii dib loo furin.
Xiriir ay Caasimada Online la sameysay xafiisyo dhowr ah oo ka tirsan dowladda, waa ay diideen inay ka hadlan arrintan.
Saadaalin ay sameeyeen sharci yaqaanada Soomaaliyeed ayaa waxay ku sheegeen in ay u badan tahay in kiiska looga guuleysan doono dowladda, taasi oo dhibaato weyn iyo magac dil ku ah dowladda federaalka Soomaaliya, ayna tahay sababta ugu weyn ee kiiska loo hortaagan yahay.
Himilo Qaran ayaa ka gaabsaday in ay arrintana si cad uga hadlaan balse waxay sheegeen in ay wali dhowrayaan go’aanka Maxkamadda iyagoo dareensan culeeska dhanka dowladda uga imaanaya.
Xubnahaan ayaa rajo ka muujiyay in kiiskaan si cadalaad ah loo qabto hadii ay dhici weysana ay banaanka soo dhigi doonto musuq maasuq iyo madax banaani la’aanta garsoorka Soomaaliya.
Muqdosho 31ka Maarso 2020 Xog dheeri ah ayaa kasoo baxeysa ciddii ay ahaayeen rag hubeysnaa oo shalay ciidamada amniga Soomaaliya ay ku dileen suuqa Bakaaraha ee magaalada Muqdisho
Ilo-wareedyo dhinaca amniga ah ayaa Caasimada Online u sheegay in ragga la dilay oo laba ahaa ay ka tirsanaayeen kooxda Daacish ee Soomaaliya, waxaana dilkooda uu yimid kadib markii ay iska caabin sameeyeen xilli la isku dayayey in hubka laga dhigo.
Laamaha amnigu Soomaaliya waxay sidoo kale sheegeen in raggaasi la toogtay ay damacsanaayeen inay weeraro ka gaystaan suuqa Bakaaraha, inkasta oo aysan faah-faahin nooca weerarka.
Qof saddexaad oo rayid ah ayaa ku dhintay rasaasta ay is-weydaarsadeen kooxdii hubeysneyd iyo ciidamada booliska. Waxaa sidoo kale labada nin ee la sheegay inay ka tirsan yihiin ururka Daacish ay dhaawaceen askari ka tirsan ciidamada booliska, sida aan xogta ku helnay.
Markii ay dhacdadan shalay dhacday ayaa waxay wararku sheegayeen in ragga la toogtay ay ahaayeen burcad, hase yeeshee daba-gal dheeri ah oo ay sameysay Caasimada Online ayey ku ogaatay inay ka tirsanaayeen kooxda Daacish.
Kooxda Daacish ayaa awood ahaan saameyn ballaaran ku lahayn magaalada Muqdisho, mana jirin muddo fog wax weeraro qorsheysan ah oo ay ka fuliyeen magaalada.
Sanadidi tagtay, Daacish ayaa caasimadda ku dishay shaqsiyaad dhowr ah oo ka tirsan shirkado ganacsi oo ay ka dooneysay lacag baad ah, hase yeeshee waxaa sida aan xogta ku helnay magaalada ka sifeeyey kooxda Al-Shabaab kadib markii shirkadahaas ay ku dacweeyeen maadaama ay ayaga lacag siiyaan.
Muqdosho 31ka Maarso 2020 Wasaaradda arrimaha dibadda ee xukuumadda Soomaaliya ayaa yeelatay xoghayaha joogtada wasaaradaasi, kaas oo loo magacaabay Danjire Maxamed Cali Nuur oo noqonaya xoghaye rasmi ah, wixii ka dambeeyey 26-kii Janaayo sanadkii 1991-dii, xilligaas oo ay burburtay dowladdii dhexe ee dalka.
Dhinaca kale war qoraal ah oo ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ayaa waxaa lagu sheegay in u jeedka uu yahay in la dardar-geliyo qorshooyinka shaqo ee horyaalla.
Illaa dib-u-soo-nooleyntii shaqada iyo howlaha wasaaradda arrimaha dibadda, xilligii dowladihii KMG ahaa waxaa maareyn jiray agaasimeyaasha wasaaradda, balse haatan waxaa si rasmi ah shaqadaasi u qaban doono xoghayaha cusub ee xilka la wareegay.
Maamulka Dowladda Jubbaland 31ka Maarso 2020 Wararka ka imaanaya gobolka Jubbada Hoose ayaa sheegaya inay sii kordhayaan khasaaraha ka dhashay dagaallo u dhexeeyea laba beeleed oo ka socda deegaano hoostaga magaalada Kismaayo ee xarunta gobolkaasi.
Dagaalladan oo salka ku haya dilal la xariira aanooyin Qabiil iyo dhul-daaqsimeed ayaa bilihii la soo dhaafay ka soo cusnoonaaday deegaanada Fuumo, Kooyaamo iyo Jiroole.
Wararka ayaa sheegaya in dagaalkii ugu dambeeyey oo shalay dhacay ay ku dhinteen in ka badan 15 ruux, kuna dhaawacmeen tiro intaasi ka badan oo rayid ay ku jiraan.
Xaaladda ayaa weli kacsan, iyadoona labada maleeshiyo beeleed ay haatan wadaan dhaq dhaqaaqyo iska soo horjeeda.
Sidoo kale ma jiro wax hadal ah oo ka soo baxay dhanka dowlad goboleedka Jubbaland oo ku aadan dagaalladaan saameyn ku yeeshay qeybo ka mid ah Jubbada Hoose
Dirirta u dhexeysa labada dhinac ayaa sidoo kale saameysay caruurta, dumarka iyo waayeelka oo lagula dhamqay tacadiyo aad u xun, sida ay horay u warisay Caasimada Online.
Dhanka kale boqolaal shacab ah oo isugu jira beeraley iyo xoolo dhaqato ayaa isaga baxay degaanka, kuwaas oo ka barakacay guryahoodam si aysan u soo gaarin waxyeelo.
Mid ka mid ah dadka deegaanka oo la hadlay warbaahinta ayaa ka warbixinaya wararkii ugu dambeeyey iyo khasaaraha inta uu gaar-siisan yahay.
Muqdisho 31ka Maarso 2020 Xaafado ku yaalla magaalada Muqdisho ayaa maalmihii la soo dhaafay waxaa aad ugu soo batay dhaca loo geysanayo bulshada ku dhaqan Muqdisho.
Dadka degan degmooyinka Kaaraan, Heliwaa, Yaaqshiid, iyo Madiina ayaa ka cabanaya kooxo wata Mootooyin iyo qaar laguneynaya oo habeen iyo maalin dadka baarta.
Dhalinyaro badan oo isku dayay in ay la cararaan moobeelo laga qaadan rabay ayaa la dhaawacay halka ugu yaraan hal qofna loo dilay arrintaan oo kale.
Dhibaatooyinka ugu daran waxay ka jiraan degmooyinka Kaaraan iyo Yaaqshiid, gaar ahaan Xaafadaha SII SII, MOWLCA SHEEKH CALI CABDULLE, JAMHUURIYA iyo goobo kale
Raga dhaca geysanaya oo koox koox u socda ayaa qaarkood ku labisan dharka ciidamada booliska iyo milateriga waxayna hada billaabeen in ay ku dhiiradaan in maalintii ay dadka baartaan.
Shacabka ku nool degmooyinkaas ayaa sheegay Saldhigyada degmooyinka oo ay cabashada u gudbiyeen aysan waxba ka qaban cabashadooda waxayna qaarkood ay dhigeen banaanbax ay uga cabanayaan dhibaatada heysata.
Xariir aan la sameynay qaar kamid ah taliyaasha booliska ee degmooyinka aan soo sheegnay ayaa waxay diideen in ay ka hadlaan cabashada dadweynaha waxayna noogu jawaabeen in booliska ay u hadli karto oo kaliya General Zakiya Xuseen Axmed balse waxay qireen in cabashadaasi ay soo gaartay.
Cabsida iyo halista jirta aawgeed xaafadaha qaar ee Muqdisho waxaa hadda guryaha lagu xaroodaa maqribka ka hor maadaama wixii xiligaas ka dambeeyo dhaco badato.
Muqdisho 31ka Maarso 2020 Wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada ee xukuumadda Soomaaliya Maxamed Cabdullahi Salaad Oomaar ayaa markii ugu horeysay ka hadlay sababta ay diyaaradda Ethiopian Airlines ugu hoggaansami la’dahay go’aanka ay dowladda Soomaaliya ku joojisay duullimaadyadii caalamiga ahaa ee imaan jiray dalka.
Wasiirka ayaa qiray in diyaaradaasi ay si joogto ah uga degto magaalada Hargeysa ee Somaliland, isla markaana duullimaadkeeda la iskaga daayey sababo jira, in kastoo sababahaas uusan si qota dheer uga hadlin.
“Ogolaansho aan siinay diyaaradaas ma jirto, ku meel gaar ama fasax caadi ah toona, waxayna hadda ka degtaa Hargeysa, balse waxay keentaa dad Soomaaliyeed, sida aad ogtihiina qofkii ka yimaada dalka dibadiisa 14 maalin oo karaantiil ah ayaa la geliyaa, marka safarada diyaaradaas waa xaalad gooni ah,” ayuu yiri wasiirka duulista hawada Soomaaliya.
Sidoo kale wasiirka ayaa sheegay in markii laga reebo Ethiopian Airlines ay diyaaradaha kale fasax ka qaataan dowladda Soomaaliya, si ay uga degaan magaalada Hargeysa ee xarunta maamulka Somaliland.
“Waxaa jira diyaarado kale oo sida dawooyin iyo qalab caafimaad oo anaga fasax naga heysta, kuwaas oo ka dega magaalada Hargeysa. Hadda waxaa Hargeysa ka degaya diyaarad daawo sida oo aan anagu fasaxnay, sidaas ayaana u fasaxnaa diyaaradaha gargaarka sida ee ka degaya Hargeysa, ileen waa lagama marmaan’e,” ayuu hadalkiisa sii raaciyey wasiir Oomaar.
Dhinaca kale wasiir Oomaar ayaa dadka xuduudaha kasoo gelaya Soomaaliya oo dhan ka dalbaday in ay joogaan goobahooda oo aysan dalka soo gelin inta ay taagan tahay khatarta cudurka Coronavirus.
“Dadka xuduudaha kasoo gelaya guud ahaan dalka, waxaan ka codsaneynaa in cudurkan uu Ilaahey naga dhaafinaayo qof kasta meesha uu ku suganyahay in uu iska joogo, oo aysan noo imaanin qof kasta meesha uu joogo Allaha ku nabad yeelee”ayuu yiri wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada ee xukuumadda Soomaaliya.
Ugu dambeyntii wasiir Oomaar ayaa dadka Soomaaliyeed ka dalbaday in ay raacaan tilmaamaha ay bixineyso wasaaradda caafimaadka, Allaah-na ay baryaan in uusan dalkeena ka badbaadiyo cudurkaas dunida aafeeyey, isagoo soo jeediyey in aan lagu mashquulin diyaarad ay dowladdu fasaxday iyo mid ay joojisay toona.
Dowladda Soomaaliya ayaa maalin ka hor dhaqan gelisay go’aan ay ku joojisay duullimaadyadii gudaha dalka, iyadoo horay u dhaqan gelisay go’aan ay ku joojisay duullimaadyadii caalamiga ahaa, waxaase xusid mudan in diyaaradda Ethiopian Airlines oo sida rakaab caadi ah ay markey duunto ka degto magaalada Hargeysa, iyadoo dalka aysan ka shaqeyn wax duullimaad ah, markii laga reebo diyaarado sida dawooyin iyo qalab caafimaad.
Garbahaareey 31ka Maarso 2020 Faah faahino dheeri ah ayaa laga helayaa qarax nooca miinada ah oo kolonyo ay wateen ciidamo ka tirsan kuwa Itoobiya ee qeybta ka ah howlgalka AMISOM lagula eegtay degmada Garbahaarey ee xarunta gobolka Gedo.
Qaraxa oo ka dhacay agagaarka saldhig ciidamadaasi ay ku leeyihiin Garbahaarey ayaa jugtiisa si xoogan looga maqlay xaafado ka tirsan fgudaha degmadaasi.
Wararka ayaa sheegaya in qaraxa ay waxyeelo kala duwan ka soo gaartay askarta lala bartilmaameedsaday miinadaasi.
Al-Shabaab oo sheegatay mas’uuliyadda qaraxaan ayaa faah faahin ka bixisay, waxaana ay sheegtay inay ku dishay ugu yaraan labo askari oo ka tirsanaa ciidamada Itoobiya.
Sidoo kale qoraalka ka soo baxay Al-Shabaab ayaa lagu sheegay in weerarkaasi loo adeegsaday qaraxa miino ay ku dhaawacday 4 askari oo kale.
Ma jiro weli wax hadal ah oo ka soo baxay saraakiisha ciidamada Itoobiya iyo kuwa milatariga Soomaaliya oo ku aadan dhacdadaasi.
Inta badan dagaalyahannada Al-Shabaab ayaa weeraro jidgal ah ku qaada ciidamada huwanta, xilliyada ay isaga kala gooshayaan koonfurta iyo bartamaha dalka.
Muqdisho 31ka Maarso 2020 Maamulka gobolka Banaadir ayaa soo saaray awaamiir hor leh oo lagu xakameynayo faafitaanka cudurka halista badan ee Corona.
Guddiga maamulka gobolka u qaabilsan ka hortagga cudurkan oo maanta shir yeeshay ayaa amaro culus dul-dhigay shacabka magaalada Muqdisho.
Afhayeenka maamulka gobolka Banaadir, Mudane Saalax Xasan Cumar (Saalax Carab) oo kulanka kadib la hadlay Wariyeyaasha ayaa sheegay in muddo laba todobaad ah la mamnuucay in lagu dabaasho xeeta Liido, sababo la xariira caabuqa Corona.
Sidoo kale afhayeenka ayaa ku celiyey markale in la xiray dhammaan hoteellada iyo maqaayadaha lagu caweeyo ee ku yaalla xeebta.
Saalax Carab ayaa sidoo kale faray saraakiisha hay’adaha ammaanka ee dowladda Soomaaliya in ay si deg-deg ah ku fuliyaan go’aanadaasi, si loo dhaqan-geliyo.
Ugu dambeyn wuxuu ku baaqay in la joojiyo isu-imaatinada dadka, sida shirarka, xafladaha aroosyada iyo munaasabadaha kale ee la’isugu yimaado.
Dowladda Soomaaliya ayaa horay u qaaday tallaabooyin looga horatagayo cudurka, iyadoo joojisay dhamaan duulimaadyada, sidoo kalena xirtay xarumaha waxbarashada dalka.
Muqdisho 31ka Maarso 2020 Wasaaradda caafimaadka ee xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa maanta qalab caafimaad oo loogu talagalay ka hortagga cudurka Coronavirus si rasmi ah ugu wareejisay maamullada HirShabelle iyo Galmudug.
Qalabkaan ayaa dowladda Soomaaliya waxa ay ka heshay Shiinaha, gaar ahaan maal-qabeenka Jack Ma, oo ah aas-aasaha shirkadda Alibaba oo qalabkaan ugu deeqay Afrika.
War-saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda ayaa waxaa lagu sheegay in qalabka sida toos ah loogu wareejiyey HirShabelle iyo Galmudug uu qayb ka tahay deeqo gaar ah loo qoondeeyey dowlad goboleedka ka jira dalka, si looga hortaggo faafitaanka COVID19.
Horay dowladda dhexe ayaa maamullada Puntland, Jubbaland iyo Koofur Galbeed u gaarsiisay deeq la mid ah tan, si loo xakameeyo cudurkaan oo halis ku haya caalamka.
Soomaaliya ayaa dhawaan xaqiijisay illaa saddex kiis oo caabuqa Corona ah oo laga helay dad ku sugan Muqdisho oo uu mid ka mid ah yahay qof Ajanbi ah.
https://www.youtube.com/watch?v=h344266CsHwWARARKA MAANTA 30ka Maarso 2020
Su’aallaha Maanta: Yaa Garoowe qarxiyey? Yaa la dooran doonaa Madaxweynaha Soomaaliya 2021? Mxaan shalay idiin sheegnay inuu qorshaynaayo Argagixiye Maal-Galiye Taliyaha Hay’adda Nabad-Sugidda Iyo Sirdoonka Qaranka Fahad Yaasiin Daahir inuu qorshaynaayo sidii loo khaarajin doonaa siyaasiyiin diiday fashilanka iyo hoggaan xummadda xukuummadda fashilantay ee Nabad Iyo Nolol “Nabar Iyo Naxdin”? Yaa kamid noqon doona siyaasiyiinta ay khaarajin doontoa Xukuummadda Fashilantay ee Nabad Iyo Nolol “Nabar Iyo Naxdin”? Maxayse tahay sunta halista ah ee ay keentay dowladda siisa lacag farbada Dowladda Soomaaliya? Maxuuse uga dhuumanayaa saxaafadda dalka Argagixiye Maal-Geliye Fahad Yaasiin Daahir “Daba-Naasle” oo ogaaday inuusan runta iyo musuqmaasuqiisa ka qarin karin Ummadda Soomaaliyeed? Maxuu La-Taliyaha Madaxweyne Farmaajo “Been-Hawaas” Maxamed Yuusuf oo wada iska-horkeen iyo qas siyaasaddeed oo lagu weerarayo beesha Maheerteen gaar ahaan Maxamuud Saleebaan? Yaa runta ka qara Ummadda Soomaaliiyeed? Ha Wiqleyso!
France 30ka Maarso 2020 Faransiiska ayaa dhaxal-sugaha Sacuudiga Maxamed Bin Salmaan ku bah-dilay qasri uu ka baxsaday boqolaal milyan oo dollar oo ku yaalla magaalada Paris.
Mas’uuliyiinta Faransiiska ayaa diiday codsi uu dhaxal-sugaha Boqortooyada Sacuudiga Maxamed Bin Salmaan ku doonayey inuu ku booqdo qasriga Louis XIV Palace oo uu ku iibsaday ku dhawaad $350 milyan dollar dhowr sano ka hor.
Sida laga soo xigtay illo wareedyo sare oo siyaasiyiin ah oo ka tirsan dowladda France, Bin Salmaan wuxuu doonayey inuu waqti ku qaato qasriga Louis XIV oo ku yaalla duleedka Paris.
Hase yeeshee, Faransiiska ayaa taas ku gacan seeray, ayaga oo booqashada Bin Salmaan u arkay mid ceebeyn doonto Madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron kaasoo ku dhex jira xilli xasaasi ah iyo culeys uu kala kulmayo shacabkiisa sababa la xiriira inuu ku fashilmay mashaariicdiisa dib u habeynta.
Sidoo kale, sababta Bin Salman loogu diiday booqashada ayaa lagu sheegay inay tahay inay France ay ka cabsi qabto inay culeys kala kulanto dunida maadaama Bil Salman lagu eedeeyey inuu ka dambeeyey dilka wariye Jamal Khashoggi.
Waxaa intaas dheer, Sacuudi Carabiya oo dhowaanahan aad looga hadal hayey warbaahinta inay jaajuustay suxufiyiin iyo ganacsato dhowr ah oo reer galbeed ah oo siyaasadeeda diidan, taasi oo booqashada Bin Salmaan ee Paris abuuri karta xiisad siyaasadeed oo madaxweyne Macron uu kula kalmo gudaha dalkiisa.
Maxamed Bin Salmaan ayaa qasrigan iibsaday xilli uu isku dayayey inuu yareeyo ku tiirsanaan Sacuudi Carabiya ee dhaqaalaha shidaalka. Qasriga Louis XIV Palace ayaa la sheegay inuu yahay kan dunida ugu qaalisan.
Bin Salmaan ayaa ku caan baxay iibsashadiida faanka ku dhisan. Sanadii 2016 wuxuu 500 oo milyan oo dollar ku iibsaday doon lagu raaxeysto, halka sanad kadib la shaaciyey inuu ahaa qofka ku guuleystay iibka xaraashka sawir gacmeedka Leonardo Da Vinci ee Salvator Mundi, oo uu ku iibsaday 450 milyan oo dollar.
Muqdisho 30ka Maarso 2020 Madaxweynaha Soomaaliya, Mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed (Farmaajo) iyo ra’iisul wasaaraha xukuumadda federaalka, Mudane Xasan Cali Khayre ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay weerarkii is-miidaaminta ee xalay fiidkii hore ka dhacay gudaha magaalada Garoowe ee caasimadda maamulka Puntland.
Madaxweyne Farmaajo oo khadka taleefanka kula xariiray, Siciid Cabdullaahi Maxamed (Deni) oo ah madaxweynaha maamulkaasi, ayaa marka hore uga tacsiyeeyey geerida guddoomiyihii gobolka Nugaal, Cabdisalaan Xasan Xirsi (Gu’jir) oo qaraxaasi lagu dilay.
Sidoo kale madaxweynaha Soomaaliya ayaa cafimaad deg-deg ah u rajeeyey shaqsiyaadka kale ee ay waxyeelada ka soo gaartay weerarkaasi.
Dhankiisa ra’iisul wasaare Xasan Cali Khayre oo war qoraal ah soo dhigay bartiisa Twitter-ka ayaa ka hadlay weerarkaan, wuxuuna sheegay in xukuumaddiisa ay xanuunka la qeyb-saneyso ehellada ay dadkooda waxyeeladu soo gaartay.
Khayre ayaa si gaar ah Puntland uga tacsiiyey geeridii ku timid, marxuum Cabdisalaan Xasan Xirsi Gu’jir, isagoo u rajeeyey inuu ka waraabiyo Jannadiisa Firdowso.
Weerarkaan oo uu fuliyey qof naftiisa hallige ah oo isku soo xiray waxyaabaha qarxa ayaa waxaa mas’uuliyadiisa sheegatay kooxda Al-Shabaab.
Garoowe oo saldhig u ah Puntland ayaa waxaa lagu tiriyaan magaalooyinka ugu amniga fiican Soomaaliya, waxaana madaxda maamulkaasi ay wacad ku mareen inay xoojin doonaan amniga, si looga hortago suurta-galnimada weeraro kale oo ka dhaca halkaasi.
Muqdisho 30ka Maarso 2020 Xaliimo Ismaaciil Ibraahim (Xaliimo Yareey) oo ah guddoomiyaha guddiga madaxa banaan ee doorashooyinka Qaranka ayaa khamiistii todobaadkaan baarlamaanka Soomaaliya u sheegtay in shaqada guddiga ay baarlamaanka ku milmeen.
Xaliimo Yareey, oo warbixin siineysay guddiga kumeel gaarka ah ee baarlamaanka Soomaaliya u qaabilsan sameynta sharciyada kale ee dhameystiraya sharciga doorashooyinka, ayaa sheegtay in shaqadii gudigeeda ay faro-gelin ku hayaan oo ay si dadban la-wareegeen baarlamaanka arrintaasina ay tahay nasiib darro weyn.
“Gudigiina shaqadaan ma ahan waajibkiina waa mid anaga noo taalo waxayna aheyd inaa annaga soo diyaarino waana caqabad taagan,” ayey Xaliimo Yarey u sheegtay ee guddiga isku dhafka ah.
Goobta ay hadalkaan ka sheegeysay Xaliimo Yareey ayaa waxaa ku sugnaa ku-simaha guddoomiyaha Golaha Shacabka, waxayna wararku sheegayaan in xubno ka tirsan guddiga ay qirsan yihiin doodda Xaliimo yareey.
Inkastoo ay Xaliimo Yareey iyo guddigeeda shaqadaan u fasaxeen guddiga baarlamanka, hadane waxay sheegtay in arintaan ay abuuri karto caqabado kale oo hor leh.
Guddoomiyaasha labada Gole ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa dhawaan si wadajir ah u magacaabay guddiga ku-meel gaarka ah ee dhameestirka xeerarka kale ee sharciga doorashooyinka, waxaana aerintaan hore uga hadlay mas’uuliyiin ka tirsan xisbiyada dalka.
Maamulka Dowladda Puntland 30ka Maarso 2020 Guddoomiyihii gobolka Nugaal ee Puntland Cabdisalaan Xasan Xirsi Gujir ayaa u geeriyooday dhaawacii kasii gaaray qarax uu fuliyey qof naftiisa hallige ah oo isku soo xiray waxyaabaha qarxa kaasi oo caawa ka dhacay magaalada Garoowe.
Madaxweynaha Dowladda Puntland Siciid Cabdullaahi Deni, ayaa ka tacsiyeeyay geerida Alle ha u naxariistee Guddoomiyihii geeriyooday.
“Madaxweynaha Dowladda Puntland Mudane Siciid Cabdullaahi Deni oo ku hadlaaya macagaca Dowladda iyo kan Shacabka Puntland waxa uu ka tacsiyaynayaa Geerida Alle ha u naxariistee Guddoomiyihii gobolka Nugaal Marxuum Cabdisalaan Xasan Xirsi (Gujir) oo arxan laawayaasha cadawga ummadda Soomaliyeed gaadmo ismiidaamin ah dhaawac kasoo gaadhay hadda u geeriyoodey, Guddoomiyuhu waxa uu gudanaayey waajibaadkiisa shaqo ee uu u hayo shacabkiisa, waxaana uu ku sugnaa xilligaasi Saldhigga Dhexe ee caasimadda Dowladda Puntland ee Garoowe” ayaa lagu yiri Qoraal ka soo baxay Madaxtooyada Puntland.
“Madaxweyne Deni waxa uu tiiraanyada Geeridaasi la qaybsanayaa shacabka Puntland, gaar ahaan eheladii, qaraabadii, qoysaskii iyo awlaaddii uu ka baxay Guddoomiye Marxuum Cabdisalaan Xasan Xirsi (Gujir), waxaana uu Alle uga baryayaa inuu dembigiisa dhaafo samir iyo iimaanna kasiiyo shacabka Soomaaliyeed, gaar ahaan kuwa Puntland, ehelkiisii iyo qaraabadiisiiba.”
Ruuxa is-miidaamiyey ayaa waxaa la sheegay in uu beegsaday gaariga uu lasocday guddoomiye Cabdirisaaq, xilli uu marayey afaafka hore ee saldhigga magaalada Garowe.
Wararka aan ka heleyno weerarkaas ayaa waxa ay intaas ku darayaan in taliyihii hore ee booliska gobolka Nugaal, Faarax Galangooli uu ku jiro mas’uuliyiintii la socotay gudoomiyaha ee ku dhaawacmay qaraxaas.
War rasmi ah oo kasoo baxay kooxda Al-Shabaa ayay ku sheegatay mas’uuliyadda weerarka caawa ka dhacay magaalada Garoowe.
“Mujaahidiinta ayaa howlgal ku beegsaday mas’uuliyiin katirsan maamulka Ashahaadda ladirirka Puntland khasaara xooggan ayaana cadowga gaaray” ayaa lagu yiri war kooban oo Al Shabaab kasoo baxay.
Turkiga 30ka Maarso 2020 Guddoomiyaasha labada Gole ee Baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan iyo Cabdi Xaashi Cabdullaahi oo ku sugan dalka Turkiga ayaa yeeshay kulamo looga hadlayo xaaladda Soomaaliya.
Warar ay heshay Caasimada Online ayaa sheegaya in mas’uuliyiintan ay ka wada hadleen arrimaha doorashooyinka, khilaafka dowladda iyo maamul goboleedyada iyo musiibada dunida ku habsatay ee coronavirus.
Labada Guddoomiye ayaa isla meel dhigay ku baraarugooda ku saabsan mudada 7 bil ee u hartay dhamaan baarlamaanka Soomaaliya iyo rajo la’aanta ka muuqata qabsoomida doorashooyinka Soomaaliya.
Mas’uuliyiin ku dhaw dhaw labada guddoomiye ayaa Caasimada Online u sheegay in dhinacyada ay dareensan yihiin in aysan dalka ka qabsoomi karin doorasho iyadoo aan meesha laga saarin khilaafka dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada.
Sidoo kale waxay walaac ka muujiyeen cudurka Coronavirus ee dalal ay kamid tahay Soomaaliya ay la daala dhacayaan. Waxay dhinacyadu isla garteen in si wadajir ah looga wada qeyb qaato ka hortaga iyo daaweynta dadka uu haleelay cudurkaan.
Waa kulankii ugu horeeyay oo ay mas’uuliyiintaan ku yeeshaan meel ka baxsan Soomaaliya, islamarkaana ay uga hadlaan arrimaha doorashooyinka oo rajo xumo weyn laga qabo.
Labada mas’uul oo aad ugu dhowaa Villa Somalia, ayaa doorashadooda kulan gaar ah oo madaxda kale ee dowladda ay ka maqan yihiin, dhalineysa tuhun ku saabsan inay qaadayaan tallaabooyin lagu xaqiijinayo in doorasho ay dhacdo, halka Villa Somalia ay dooneyso in doorashada dib loo dhigo.
Muqdisho 30ka Maarso 2020 Waxaa shalay magaalada Muqdisho dib loogu soo celiyay raashin gargaar ah iyo daawooyin loo qaaday qoysas danyar ah oo ku dhibaateysan degaanka Bashaqle ee degmada Warsheekh.
Gargaarkaan ayaa waxaa Muqdisho ka qaaday dhallinyaro ka tirsan Golaha degaanka ee degmada iyo dhalinyaro kale oo degaanka ka soo jeeda, kuwaas oo hore u soo arkay nolal adag oo degaanka ka jirta.
Sida ay xog ku heshay Caasimada Online, gargaarkaan oo Arbacadii ka baxay Muqdisho ayaa waxaa saddex maalin hortaagnaa ciidamo beeleed dalbaday in lacag la siiyo ama aysan socon doonin gurmadka degaanka.
Wadahadal iyo dadaal dheer oo ay sameeyeen maamulka degmada, Xildhibaanada Golaha degaanka iyo Odayaasha dhaqanka ayaa guul darro ku soo dhamaaday waxaana wafdigaasi ku jiray weriyaal Muqdisho laga qaaday si ay usoo tabiyaan.
Degmada Warsheekh oo kamid ah degmooyinka taariikhda fog leh kuma sugna ciidamo ka tirsan dowladda Soomaaliya boolis ama milateri balse waxaa laba xarun banaanka magaalada ku leh AMISOM.
Degmadaan ayaa ka tirsan magaalooyinka ku dhib qabta ciidamo beeleedyada oo qaarkood la sheegay in ay ka tirsan yihiin Milateriga Soomaaliya, waxayna nolashooda ka maareeyaan Isbaaro iyo lacago ay ka qaataan suuqyada, gargaarka iyo dalxiisayaasha.
Muqdisho 30ka Maarso 2020 Guddoomiyaha Gobolka Banaadir ahna Duqa Muqdisho Cumar Maxamuud Maxamed (Cumar Filish) ayaa xalay shir guddoomiyay shirka Todobaadlaha ee maamulka gobolka Banaadir, kaasi oo ka dhacay xarunta degmada Shangaani.
Shirkan oo ay kasoo qeyb-galeen wasiir ku-xigeenka wasaaradda Awqaafta iyo Diinta, guddoomiyaha guddiga Qaran ee Abaabulka iyo Wacyigelinta ayaa waxaa looga hadlay caabuqa Covid-19 oo dhibaato xoogan ku haaya dunida.
Duqa Muqdisho ayaa inta uu shirka socday amray in la joojiyo isku imaatanka Bulshada si loogu fogaado wax weliba oo keeni kara caabuqa Covid19 oo ah mid si fudud la isaga qaadi karo taabashada iyo Neefta, asigoo carabka ku adkeeyay maqaayadaha iyo Hoteelada ku yaala Liido oo bulshada si aad ah isugu yimaadaan.
Duqa Muqdisho ayaa sidoo kale faray Bulshada in ay u hogaansamaan fariimaha Wacyigelin ee wasaarada caafimaadka iyo waaxda caafimaadka ee dowladda Hoose ee Xamar, Iyadoona ay si wadajir ah Barnaamijyada wacyigelin ay iska kaashan doonaan Wasaaradda Caafimaadka, wasaaradda diinta iyo Awqaafta, guddiga Qaran ee abaabulka iyo wac-yigelinta iyo maamulka Gobolka Banaadir.
WARARKA MAANTA 28ka Diseembar 2019 Sir Culus!
Su’aallaha Maanta: Yaa qarxinaaya #Muqdisho? Maxaase loo qarxin karin magaalooyinka kale? Maxaa loo qarxiyey Ex- Kontrool? Meeqo qof ayaa ku dhintay ama dhaawacmay? Maxuuse Taliyaha Booliska ugu diiday inay Warbaahinta si xor ah uga hadasho qaraxa Ex- Kontrool? Yaa dalka #Soomaaliya ka dhigay waddanka adduunka ugu musuqmaasuqa badan? Yaa dhacaya canshuurta #Muqdisho? Maxay Dowladda nabar iyo Naxdin muddo 3 sanno shilin Soomaali u isticmaali karin? Yaa Madaxweyne ka noqon doona #Soomaaliya kadib fashilka 4ta sanno ee Madaxweyne Mudane Farmaajo “Been-Hawaas” Iyo Raysal Wasaare Mudane Mudane Kheyre? Maxay beesha caalamka u diiday inay xukuummadda fashilantay ku darsato 2 sanno oo dheeraad ah? Maxay Dowladda Nabar Iyo Naxdin maalinta Arbacada wax u fulisaa? Yaa dhaca canshuur caasimadda #Muqdisho? Maxay weli wadooyinka/jidadka Muqdisho u xirxiran yihiin? Yaa waddanka #Soomaaliya ka dhigay waddanka adduunka ugu musuqmaasuqa badan Madaxweyne Farmaajo “Been-Hawaas”?
Muqdisho 28ka Diseembar 2019 Xildhibaannada Golaha Shacab-ka ayaa maanta oo Sabti ah kulankoodii caadiga ah isugu uga dooddi doona sharciga Doorashooyinka Qaran ee dhawaan loo gudbiyay. Xildhibaannada ayaa sharcigan siweyn ugu kala aragti-duwan sharcigan oo qaarkood ay ku tilmaameen in uu yahay mid hal dhinac oo kale u daneynaya, laakiin aan ku qotomin rabitaa shacabka ee ah awood doorasho dib gacantooda loogu celiyo.
Balse waxaa dhinaca kale jira xildhibaanno iyaguna difaaca sharcigan oo u arka in uu yahay mid ay tahay sidiisa loo ansixiyo.
Madaxda ugu sarreysa dalka ayaa iyagu dhankoda u muuqda kuwo kalsooni badan ku qaba sharcigan hor yaala Baarlamaanka iyaga oo ugu baaqay xildhibaannada in waajibkooda ka gutaan kaddibna la galiyo codka kalsoonida.
Muqdisho 28ka Diseembar 2019 Wasiirkii hore ee amniga gudaha, Mudane Cabdirisaaq Cumar Maxamed, haatana ah xildhibaan ka tirsan golaha shacabka ayaa ka hadlay qaraxii saaka ka dhacay isgoyska Ex-koonyarool Afgooye ee magaalada Muqdisho.
Xildhibaanka oo qoraal kooban soo dhigay barta fariimaha gaagaaban ee Twitter-ka ayaa shaaciyey in qaraxaasi ay ku dhinteen dad kor u dgaafaya 90 qof oo badan rayid.
Wasiirkii hore ee amniga ayaa sidoo kale kala saaray tirada dadka dhintay, wuxuu tilmaamay 73 qof ay haayeen shacab, halka 17 ay ka tirsanaayeen ciidanka Booliska.
Sidoo kale wuuxuu intaasi in qaraxii saaka ay ku dhinteen illaa afar ajaaniib ahaa, inkastoo uusan sheegin dalka ay ka soo jeedaan. Weli dowladda Soomaaliya ma shaacin khasaaraha ka dhashay weerarkaan ismiidaamiinta ahaa, balse guddoomiyaha maamulka gobolka Banaadir, Cumar Filish ayaa sheegay in khasaaraha dhimashada iyo midka dhaawaca uu aad u badan yahay .
Sidoo kale Duqa Muqdisho ayaa xusay in weerarkaan la damacsanaa in laga fuliyo Caasimada, si loola beegsado xarumo iyo mas’uuliyiin muhuum ah.
Xaaladda ayaa haatan ah mid degan, iyadoona uu burbur xoogan soo gaaray dhismayaashii ku yaallay halkaasi.
Muqdisho 28ka Diseembar 2019 Qaar ka mid ah xildhibaannada Madasha Xisbiyada Qaran ayaa shir xasaasi ah oo looga arrinsanaayo sharciga doorashooyinka iyo xaaladda kala guurka ah ee dalka maanta ku yeeshay xaruntooda KMG ah ee Muqdisho.
Kulankan ayaa waxaa shir guddoomiyey madaxweynihii hore ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed, oo ah hoggaamiyaha Madasha, waxaana sidoo kale ka qeyb galay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud, oo hadda ah guddoomiyaha xisbiga UPD.
Madasha Xisbiyada Qaran ayaa walaac ka muujiyey islamarkaana aad uga soo horjeeda qodobka 53-aad ee sharciga doorashooyinka qaranka, kaasi oo muddo kordhin siin karo xildhibaanada, haddii la ansixiyo.
Qodobkaas, ayaa waxaa ku qoran in haddii ay keenaan duruufo, sida amni darro baahsan oo dalka ka dhacda, uu baarlamanka waqtiga kororsano karo muddo lix bilood ah. Madasha Xisbiyada Qaran ayaa dooneysa in qodobkaas laga saaro sharciga doorashooyinka, waxaana ay qorsheynayaan inay mooshin ka keenaan, sida xubno ka mid ah ay u sheegeen Warbaahinta.
addaba maxaa ku qoran qodobka 53-aad ee sharciga doorahsooyinka:
c. Arrimo farsamo oo aan la’aantood doorashada qabsoomi karin. Xaaladaha lagu soo sheegay faqaradda 3aad ee qodobkan haddii ay ku kooban tahay hal degmo, gobol ama dowlad goboleed iyo wax ka yar kala bar dalka, dib-u-dhaca doorashadu wuxuu saameynayaa keliya goobaha lagu xusay faqraddan. GMDQ marka ay qiimeeyaan daruufaha ku xusan faqradda 3aad ee qodobkan iyo muddada uga degdegsan ee lagaga bixi karo, waxay warbixintooda oo sababeysan kuna caddahay baaxadda ay duraafaha saameeyeen oo jadwal-shaqana leh u soo gudbinayaan Goleyaasha Baarlamaanka Federaalka si ay go’aan uga gaaraan. GMDQ waxay BFS ka codsan karaan muddada cusub ee doorashadu ku qabsoomi karto oo aan ka badnayn Lix (6) Bilood; Haddii xaaladaha ku xusan faqradda 3aad aan lagu xallin muddada ku xusan faqradda 6aad oo GMDQ caddeeyo ineysan doorashadu muddadaas ku qabsoomi karayn, xubnaha Goleyaasha 24 Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya ayaa sii wadaya waajibaadkooda Dastuuriga ah ilaa doorashada laga qabto.
Muqdisho 28ka Diseembar 2019 Kooxo hubeysan ayaa saacadihii la soo dhaafay sarkaal la sheegay inuu ka tirsanaa ciidamada Booliska Soomaaliyeed ku dilay qeybo ka mid ah degmada Heliwaa ee gobobolka Banaadir.
Dilka oo ay fuliyeen rag ku hubeysnaa bistoolado ayaa waxaa uu ka dhacay xaafadda Suuqa Xoolaha ee maagaalada Muqdisho, sida ay innoo xaqiijiyeen ilo deegaanka ah.
Al-Shabaab ayaa durbo sheegatay masuuliyadda dilka sarkaalkaasi, waxaana ay tilmaamtay in xoogagii fuliyey ay si aayar ah uga baxsadeen goobta.
Sidoo kale warka ka soo baxay kooxda Al-Shabaab lagu sheegay in sarkaalkaasi lagu magacaabi jiray Muxamed Isxaaq, islamarkaana uu ka howlgalayey xerada Iskuul Boliisiya, sida ay hadalka u dhigtay. Dhanka kale ma jiro weli wax hadal ah oo ka soo baxay dhinaca sarakiisha ciidamada ammanaka, gaar ahaan kuwa Booliska oo ku aadan dilkaasi.
Inta badan Al-Shabaab ayaa weeraro gaadma ah ku qaada askarta dowladda ee ku sugan magaalada Muqdisho, iyadoo u geysata dilal qorsheysan.
Dhowaan ayey aheyd markii labo askari ay ku dishay xaafadda Suuq Bacaad oo ka tirsan degmada Yaaqshiid ee gobolka Banaadir.
Muqdisho 28ka Diseembar 2019 Waxaa isa soo taraya khasaaraha rasmiga ee ka dhashay qaraxii ismiimaadiinta ahaa ee saaka aroortii hore ka dhacay isgoyska Ex-Koontarool Afgooye ee duleedka magaalada Muqdisho.
Qaraxa oo loo adeegsaday gaari nooca raaxada ah oo laga soo buuxiyey walxaha qarxa ayaa waxaa ku dhintay in ka badan 20 qof, siday warbaahinta u xaqiijiyeen ilo lagu kalsoon yahay.
Dadka dhintay ayaa waxaa ka mid ah labo Injineer oo Turki ah iyo seddex askari oo ilaalo u aheyd, kuwaas oo la socday gaari nooca aan xabada karin oo marayey halkaasi.
Wararka ayaa sheegaya in bartilmaameedka weerarka uu ahaa iyagu, waxaana sidoo kale meesha ka agdhow xarun canshuuraha looga qaado gaadiidka isaga kala goosha waddada xiriirisa magaalooyinka Muqdisho iyo Afgooye ee gobolka Shabeelaha Hoose. Sidoo kale waxaa la xaqiijiyey in qaraxaasi ay ku dhinteen saddex askari oo ka tirsanaa ciidamada dowladda, kuwaas oo goobta ku sugnaa.
Khasaaraha ugu badan ayaa wuxuu soo gaaray dad shacab ahaa oo isugu jiray arday jaamacadeed oo la socday gaari Bus- ah iyo kuwa kale oo qaraxa la kulmay.
Weli saraakiisha ammaanka ee dowladda federaalka Soomaaliya kama hadlin qaraxaan, waxaana goobta ku sugan ciidamo fara badan oo ka tirsan kuwa Booliska Soomaaliyeed.
Tan iyo markii la bilaabay dhismaha waddada isku xirta Muqdisho iyo Afgooye waxaa waddadaan ka dhacay weeraro kala duwan oo lagu qaaday Injineerada dhisaya waxaana sheegatay kooxda Al-Shabaab oo marar isku dayday inay is hortaagto dhismaha jidkaasi.
Muqdisho 28ka Diseembar 2019 Guddoomiyaha maamulka gobolka Banaadir, ahna Duqa Muqdisho, Cumar Maxamed Maxamed (Filish) oo tegay isgoyska Ex-Koontarool Afgooye ayaa ka warbixiyey qaraxii xooganaa ee saaka dhacay halkaasi.
Duqa Muqdisho ayaa sheegay in khasaara badan uu geystay qaraxa, islamarkaana ay weli socdaan baaritaano dheeraad ah oo ku aadan tirakoobka dadka ku waxyeeloobay.
Sidoo kale wuxuu sheegay in dhaawaca uu ka badan yahay 90 qof oo u badan dad rayid ah oo ka agdhawaa meesha uu ka dhacay qaraxaasi oo ahaa mid ismiidaamin ah.
Cumar Filish ayaa sidoo kale xaqiijiyey in dadka waxyeelada soo gaartay ay ka mid ahaayeen Injineero Ajnabi ah iyo arday badan oo la socotay gaari Bus ah. Ugu dambeyn wuxuu carabka ku dhuftay in ismiidaamiyaha uu damacsanaa inuu gudaha u soo galo magaalada Muqdisho, si uu u beegsado xarumo iyo mas’uuliyiin muhiim ah, balse ay ka hortageen ciidamada ammaanka oo uu u mahadceliyey guddoomiyuhu.
“Waxaan rabaa inaan halkaan uga mahadceliyo Ciidamadii amniga ee shafka u dhigay, dhagarbayaashu hagar daamada ay soo abaabuleen in ay u gudubto magaalada, waxaa ay doonayeen in uu u gudbo magaalada si goobo muhiim ah iyo mas’uuliyii muhiim ah loogu baabi’iyo.” ayuu yiru guddoomiyaha maamulka gobolka Banaadir, Cumar Filish.
Dhinaca kale isbitaallada Muqdisho, gaar ahaan midka Madiina ayaa waxaa la dhigay dhaawacyada ugu badan, waxaana isbitaalkaasi buux dhaafiyey shacab badan.
Xaaladda ayaa weli kacsan, waxaana uu burbur xoogan soo gaaray dhismayaashii ku yaallay halkaasi.
WARARKA MAANTA 27ka Diseembar 2019 Sir Culus!
Su’aallaha Maanta: Yaa dalka #Soomaaliya ka dhigay waddanka adduunka ugu musuqmaasuqa badan? Yaa dhacaya canshuurta #Muqdisho? Maxay Dowladda nabar iyo Naxdin muddo 3 sanno shilin Soomaali u isticmaali karin? Yaa Madaxweyne ka noqon doona #Soomaaliya kadib fashilka 4ta sanno ee Madaxweyne Mudane Farmaajo “Been-Hawaas” Iyo Raysal Wasaare Mudane Mudane Kheyre? Maxay beesha caalamka u diiday inay xukuummadda fashilantay ku darsato 2 sanno oo dheeraad ah? Maxay Dowladda Nabar Iyo Naxdin maalinta Arbacada wax u fulisaa? Yaa dhaca canshuur caasimadda #Muqdisho? Maxay weli wadooyinka/jidadka Muqdisho u xirxiran yihiin? Yaa waddanka #Soomaaliya ka dhigay waddanka adduunka ugu musuqmaasuqa badan Madaxweyne Farmaajo “Been-Hawaas”? Hargaysa 27ka Diseembar 2019 Xoghayaha arrimaha gudaha ee xisbiga UCID Maxamuud Cali Ramaax ayaa xabsiga loo taxaabay ka dib markii lagu eedeeyey in uu aflagaadeeyey gudoomiyaha golaha Wakiiladda Somaliland. Ramaax oo inta aan la xidhin warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in baryahanba uu hanjabaado iyo cabsi galin lagu hayey, islamarkaana aanu xadhiga u arkeen wax weyn. Taliyaha dambi baadhista ciidanka Booliska Faysal Xiis ayaa isna cadeeyey xadhiga Ramaax inuu jiro,isla markaana waxa uu xusay inuu ka soo dacwooday gudoomiyaha golaha Wakiilada Baashe Maxamed Faarax oo uu u gaystay ceebeen iyo aflagaadeen. “Maxamuud Cali Ramaax waxa lagu eedeeyey inuu aflagaadeen iyo ceebeen u gaystay gudoomiyaha golaha Wakiiladda Baashe Maxamed Faarax, waxanu ku yidhi gudoomiye Baashe waxa uu xidhiidh la leeyahay dad cadow ku ah Somaliland, gudoomiyaha Baarlamaankuna taas ayuu ka soo dacwooday isagoo shakhsi ah oo soo maray sifihii sharciga ahaa”ayuu yidhi Faysal Xiis. Maamulka Dowladda Puntland 27ka Diseembar 2019 Puntland ayaa si rasmi ah ugu eedeysay dowladda federaalka ah ee Soomaaliya inay mamaulkaas kusoo qaadday “dagaal dhinaca waxbarahsada.” Afhayeenka Puntland, Jaamac Yuusuf Dabaraani oo ka warbixinayay shirka todobaadalaha ah ee Golaha Xukuumada Puntland ayaa sheegay in dawladda federaalka Soomaaliya ay weli waddo “dagaal ka dhan ah “oo la xiriira xagga waxbarashada. Dabaraani ayaa sheegay in dawladda ay diiday inay shahaadooyinka siiso ardayda reer Puntland ee dhameysta dugsiyada sare. “Meelihii ay wada-shaqaynta xagga waxbarashada la lahayd ayey dowladda u dirtay warqado ay ku hor istaagayaan ardayda Puntland, waxaana ka mid ah dalka Masar, dhawaana arinkaas darteed halkaas waxaa u tagay wasiirka waxbarashada Puntland, si arimahaas wax looga qabto, dhaqamada noocaas ah waa kuwa muujinaya in lala dirirayo Puntland dhinaca horumarka waxbarshada” Ayuu yiri Dabaraani. Afhayeenku ayaa sidoo kale xusay in qodobadaas ay yihiin “kuwa baalmarsan” dastuurka Soomaaliya iyo heeshiisyadda ay horay u gaareen dawlafda dhexe iyo maamulada, waxa uuna tilmaamey in cawaaqib xumadda ka dhalata ay qaadan doonaan hogaanka dowladda federaalka Xiisadda labada dhinac ayaa kasoo billaabatay markii Puntland ay diiday inay qeyb ka noqoto imtixaanka shahaadiga ah ee ay dejisay wasaaradda waxbarashada Soomaaliya. Si kastaba, Xildhibaano ka tirsan Baarlamaanka Soomaaliya, islamarkaana laga soo doortay degaanada Puntland, ayaa 7-dii September sheegay khilaafka labada dhinac kadib markii ay la kulmeen Wasiirka Waxbarashada Soomaaliya. “Waxaa maanta xafiiskeyga kulan kula qaatay xildhibaanada ugu muhiimsan ee kasoo jeeda deegaanada Puntland…Waxaan kawada hadalnay sidii ardayda Puntland ee sannad dugsiyeedkii 2018/2019 imtixaankoodii la siyaasadeeyay ay u heli lahaayeen shahaadada Dowladda Federaalka Soomaaliya. Waxaa farxad ii ah in ugu danbeyntii aan isla garannay xal oo aan dib idinkala wadaagi doono.” ayuu yiri wasiir Goodax oo hadlay kadib kulankaas. Maamulka Dowladda Galmudug 27ka Diseembar 2019 Magaalada Dhuusamareeb ee xarunta maamulka Galmudug waxaa goor dhaw gaaray wafdi hordhac u ah booqasho la filayo in Ra’iisul Wasaare Kheyre uu ku tago magaalada Dhuusamareeb. Wafdiga gaaray Dhuusamareeb ayaa iskugu jira xubno ka tirsan shaqaalaha xafiiska Ra’iisul Wasaaraha iyo ilaalada gaarka u ah Ra’iisul Wasaare Kheyre. Ammaanka garoonka diyaaradaha iyo guud ahaan ammaanka magaalada Dhuusamareeb ayaa siweyn loo adkeeyay, waxaana sugida amniga iska kaashanaya ciidanka dowladda federaalka iyo kuwa AMISOM ee ku sugan gudaha iyo daafaha magaalada. Waxaan wali si rasmi ah loo shaacin booqashada uu Ra’iisul wasaare Kheyre ku tagayo Dhuusamareeb, waxayna ku soo aadeysaa iyadoo khilaaf badani uu ka taaganyahay aqbalaadda 20-kii xildhibaan ee dowladdu u qoondeysay Ahlu-Sunna. Jadwal ay hore u shaaciyeen guddiga farsamada doorashada Galmudug ayaa dib u dhac ku yimid iyadoo jadwal labaad oo ay dhowaan soo saareen uu u muuqdo mid aan ku hirgeli karin sidii loo qorsheeyay. Waxaa jira weli cabasho ay muujinayaan qaar kamid ah beelaha Galmudug, taas oo ku aadan qaabka ay Ahlu-Sunna u soo xushay xubnihii laga siiyey baarlamaanka Galmudug. Muqdisho 27ka Diseembar 2019 Wasiirkii hore ee batroolka Soomaaliya Maxamed Mukhtaar Ibraahim ayaa qoraal uu soo dhigay bartiisa facebook kusoo bandhigay taariikho is-diidan oo la xiriira xilliga bixinta shatiyada shidaalka Soomaaliya, kuwaas oo lagu arkay qorshaha 9-aad ee Horumarinta Qaranka ee dhowaan lasoo bandhigay. Waxaan u hambalyaynayaa Wasaaradda Qorsheynta iyo dhamaan intii ka so shaqeysay diyaarinta Qorshaha 9-aad ee Horumarinta Qaranka. Qorshaha oo ka kooban 400-bog, inta uu dhaxeysa bogga 226 – 228 waxaa looga hadlayaa arimaha shidaalka. Qoraalka waxaa ku jiro taariikho iska hor imaanaya, haddii aanan si fiican looga fikirina Soomaaliya u keeni karo culeys. Bogga 226, faqradiisa 10.1 waxa uu lee yahay “Dowladdu waxay qorsheyneysaa inay bixiso 15 xermo (blocks) 6-da bilood ee soo socota ka dibna kuwa kale loo bixiyo si joogto ah. Dowladda waxay haminaysaa inay bilowdo shati siinta sahaminta batroolka iyo macdantaka hor Maarso 2020.” Sidoo kale qoraalka bogga 228, faqradiisa 10.3, xarafkiisa (ii) waxa uu lee yahay “Qabyo qoraalka sharciga Shidaalka waxaa la filayaa inuu diyaar noqdo ka hor Juun 2020.” Xermooyin shidaal ama heshiis shidaal lama geli karo ayada oo aanu soo dhamaystirmin Sharciga Shidaalka, sida daraadeed waxaa loo baahan yahay in labadaan taariikh la is waafajiyo. Isla qoraalka bogga 228, faqradiisa 10.3, sadarka ugu danbeeyo waxa uu lee yahay “Soomaaliya waxay sidoo kale qorsheyneysaa inay dhisto Hay’adda Batroolka Soomaaliya iyo Shirkadda Batroolka Qaranka Soomaaliyeed, Hay’adda Macdanta Soomaaliya iyo Shirkadda Macdanta Soomaaliyeed hal sano kadib sharciga batroolka marka la ansixiyo.” Qabyo qoraalka Sharciga Shidaalka waxa uu sheegayaa in Hay’adda Batroolka Soomaaliya iyo Shirkadda Batroolka Qaranka Soomaaliyeed la sameeyo sanad gudahood marka sharciga la ansixiyo ee ma ah sanad kadib marka sharciga la ansixiyo. Mida kale Qorshaha Qaranka waxa uu sheegayaa inay dowladda qorsheynayso inay bixiso shatiga sahminta shidaalka ka hor Maarso 2020 taas oo macnaheedu yahay in dowladdu bixin doonto shatiyo ka hor inta aanan la dhisin Hay’adda Batroolka Soomaaliya iyo Shirkadda Batroolka Qaranka Soomaaliyeed. Waxaan rajaynayaa in qoraalka Qoshaha Qaran iyo qaab maamulka kheyraadka noo saxmaan. Maamulka Dowladda Puntland 27ka Diseembar 2019 Madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullahi Dani ayaa caawa shacabka magaalada Garowe la qaatay kulan ay ku weydiinayeen su’aalaha ay qabaan kuwaas oo si toos ah uu uga jawaabayey Madaxweyne Dani. Su’aalaha ay dadku weydiinayeen Madaxweyne Dani ayaa u badnaa arimaha doorashooyinka dalka tan dowladda dhexe iyo tan Puntland-ba iyo sidoo kale waxa uu salka ku hayo khilaafka Puntland kala dhexeeya dowladda federaalka, kaas oo xoogiisu soo jiray intii uu xaafiiska joogay Madaxweyne Dani. Saciid Dani ayaa mid mid uga jawaabayey su’aalaha ay dadku weydiinayeen waxuuna sheegay in dowladda federaalku ay meel iska dhigtay wax wada guddoomin, isla markaana ay wax walba qasanyihiin, hadii ay ahaan laheyd qabya tirka dastuurka dalka, nuuca doorasho ee dalku aadayo oo aan wali cadeyn, wada shaqeyntii dowladda iyo dowladaha xubnaha ka ah iyo arimo kale. Dani ayaa mar uu si gaar ah u dul istaagay waxa uu kala socdo arimaha doorashooyinka waxa uu yiri, “Doorashada federaalka diyaar garowga ugu badan waxaa laga rabaa Puntland ma ahan in laga rabo dowladda federaalka oo kaliya, mana jirto nidaam gaar ah oo aan hada leenahay waa inay ku dhacdaa doorashudu, sida madaxda qaar oo lahaa waa lagama maarmaan inay noqoto 4.5, anagu waxaan leenahay mudada yar ee aan heysano aan ka wada tashano sidii ay wax noogu hagaagi lahaayeen”. Madaxweyne Dani ayaa la weydiiyey halka uu ku danbeeyey balan qaadkiisii ahaa inuu heshiisii doono Axmed Madoobe iyo madaxda dowladda federaalka, waxuuna ku jawaabay in dhawaan uu qorsheynayey inuu arintaas darteed Xamar u aado, balse uu ka baaqday kadib markii ay dowladdu shirkii wasiirrada maaliyadda dalka gogoshiisa dhigtay magaalada Kismaayo, halkaas oo Axmed Madoobe uu shirkaas ka furay, taas oo sida uu sheegay asaga ula muuqato inay Axmed Madoobe aqoonsatay dowladdu. Mar wax laga weydiiyey arimaha waxbarashada Puntland ayuu yiri, “Arrinta waxbarashada dadka cabsida ka qaba maahi shahaadadii ayaa ardayda loo diiday anigu aqoon gooni ah ayaan u leeyahay, hadii qof Xamar jooga uu diido waxaa qabanaya qodob dastuuri ah, sidii loola xisaabtami lahaana Puntland ayey u taallaa, sharciga xaalad mastuur kama galeyno dad badan ayaa igula taliya ciyaalka u daney oo shahaadada ku raadi xaalad mastuur, taasna ma dhaceyso cid sharciga ka weyn ma jirto” Hadalkan ayaa ku soo aadaya iyadoo kulankii maanta ee golaha wasiirrada Puntland laga sheeciyey in dowladda federaalku ay shahaadooyinkii dugsiyada sare u diiday ardayda deegaanada Puntland, sidoo kalena ay dowladda federaalku is hortaag ku sameysay deeqo waxbarasho oo Puntland ay ka heshay qaar ka mid ah dalalka caalamka. https://www.transparency.org/country/SOM